Otu esi eme iru mmiri na gburugburu ebe obibi na-enweghị humidifier: ndụmọdụ kacha mma | Green Renewables
Otu esi eme iru mmiri na gburugburu ebe obibi na-enweghị humidifier
Portillo nke German | 10/05/2022 12:00 | Homelọ Green
Nnukwu nkụ na iru mmiri n'ime ụlọ na-emerụ ahụ ike, n'ihi ya, anyị aghaghị ịchọta ebe etiti n'etiti abụọ ahụ. Karịsịa n'oge oyi na ime ụlọ. Mgbe gburugburu ebe obibi dị oke nkụ, e nwere ụzọ dị iche iche isi mee ka iru mmiri dị n'ime ụlọ dịkwuo elu, n'ihi nke a, ị nwere ike tinye ịwụ mmiri n'ime ụlọ ahụ, kụọ ụfọdụ osisi n'ime ụlọ ma ọ bụ mepee ọnụ ụzọ iji saa ahụ. Enwere ụzọ isi mụta otu esi eme iru mmiri na gburugburu ebe obibi na-enweghị humidifier.
N'isiokwu a, anyị na-agwa gị ndụmọdụ kachasị mma na-esi eme ka mmiri dị jụụ na gburugburu ebe obibi na-enweghị humidifier.
1 Otu esi eme iru mmiri na gburugburu ebe obibi na-enweghị humidifier
1.1 Nwee akwa nhicha mmiri n'ime ụlọ
1.2 Tinye ịwụ mmiri esi mmiri n'ime ụlọ
1.3 Gụnye ụfọdụ osisi n'ime ụlọ
1.4 ịsa ahụ na ọnụ ụzọ meghere
2 Ndụmọdụ ndị ọzọ maka otu esi eme ka mmiri dị gburugburu na-enweghị humidifier
2.1 mmiri osisi gị
2.2 Jupụta mmiri na mmiri
2.3 eji vases
2.4 Tinye mmiri n'akụkụ ebe okpomọkụ
2.6 kpọgidere uwe n'ụlọ
2.7 Ewelitela ọnọdụ okpomọkụ nke ukwuu
2.8 Jiri mkpụrụedemede dị n'ime
Òtù Na-ahụ Maka Ahụ Ike Ụwa kwuru na n'ógbè ndị nwere ihu igwe kpọrọ nkụ, ikuku ikuku dị mma maka ahụike bụ 60%. Mgbe iru mmiri na-erughị 20%, ọ nwere ike ịkpasu iwe anya, ọbara imi, akpụkpọ ahụ kpọrọ nkụ na nsogbu allergies., karịsịa na ndị nwere ụkwara ume ọkụ ma ọ bụ bronchitis.
Ndị a bụ ndụmọdụ kachasị mma iji mụta otu esi eme ka mmiri dị jụụ na-enweghị humidifier:
Nwee akwa nhicha mmiri n'ime ụlọ
Ịgbasa akwa nhicha mmiri n'azụ oche, isi oche, ma ọ bụ bọọdụ ụkwụ bụ ụzọ dị mma isi mee ka ikuku dị n'ime ụlọ gị. Cheta ka ị ghara ịkwanye akwa nhicha ahụ n'ihi na ọ ga-emepụta isi na-adịghị mma.
Tinye ịwụ mmiri esi mmiri n'ime ụlọ
Ndụmọdụ a dị mma, ọkara otu ịwụ mmiri zuru ezu n'ime ụlọ ahụ, dị ka o kwere mee na isi ihe ndina iji belata ikuku akọrọ dị ugbu a ma na-eku ume n'abalị. Ị nwere ike iji ịwụ mmiri aromatherapy tinye 2 tụlee mmanụ dị mkpa nke lavender n'ime mmiri, osisi a nwere ihe ndị na-enyere gị aka iru ala ma zuru ike.
Ekwesịrị ịkpachara anya ka ị ghara iji usoro a n'ime ụlọ ụmụaka, n'ihi na mmiri ọkụ nwere ike ịkpata ọkụ, karịsịa na-enweghị nlekọta nne na nna ma ọ bụ okenye.
Gụnye ụfọdụ osisi n'ime ụlọ
Osisi bụ nnukwu ihe na-eme ka gburugburu ebe obibi, tumadi osisi mmiri dị ka mma agha St. George, nke a makwaara dị ka ire nne di, na fern na-eme ka ikuku dị mma.
Ọ dị mkpa icheta na osisi chọrọ nlekọta, mmiri ọ bụrụhaala na ala adịghị oke mmiri ma mara ma ọ bụrụ na osisi kwesịrị ka ìhè anyanwụ ma ọ bụ ndo.
ịsa ahụ na ọnụ ụzọ meghere
Site na ịsa ahụ na ọnụ ụzọ ụlọ ịsa ahụ meghere, ị na-ahapụ ikuku mmiri ka ọ gbasaa site na ikuku, na-eme ka gburugburu ebe obibi na-eme ka mmiri na-ekpo ọkụ na-eme ka ọ dịkwuo mma. N'oge okpomọkụ ọ na-esiri ike ịsa ahụ na mmiri ọkụ, ya mere, aghụghọ dị mma hapụ ịsa ahụ na-eji mmiri ọkụ na-agba ọsọ nkeji ole na ole ka onye ahụ na-akpọnwụ ma ọ bụ na-eyi uwe.
Ndụmọdụ ndị ọzọ maka otu esi eme ka mmiri dị gburugburu na-enweghị humidifier
mmiri osisi gị
Ị maara na ihe ọkụkụ na-apụta? Eleghị anya ee, mana ọ ga-abụ na ị maghị etu usoro a si dị mma ma a bịa n'iwepụta ọnụ ụlọ. Ọ bụrụ na a na-agba osisi ndị ahụ mmiri, ha ga-eweghachite pasent nke mmiri kachasị mma iji mee ka ikuku dị n'ụlọ gị dị ọhụrụ ma na-egbuke egbuke.
Osisi nwere usoro nke obere oghere n'ime akwụkwọ ha iji rụọ ọrụ. mgbe ị na-agba ha mmiri, ha na-ebugharị mmiri na mgbọrọgwụ, akụkụ ndị a nke osisi ahụ na-ebuga mmiri ahụ na pores.
Ọrụ nke pores bụ ịhapụ mmiri ma debe ya n'ime ụlọ ebe ha dị. N'ụzọ dị otú a, ụlọ ebe osisi ahụ ga-enwe iru mmiri dị elu karịa akụkụ ndị ọzọ nke ụlọ gị. Osisi ụlọ ọ bụla masịrị gị ga-arụ ọrụ.
Jupụta mmiri na mmiri
Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu tank azụ, nke a nwere ike inyere gị aka ịbawanye iru mmiri ma ị nwere azụ ma ọ bụ na ị nweghị. Naanị ị ga-ejupụta ya fọrọ nke nta ka o zuo oke ma tinye ya n'usoro n'ime ụlọ ka ọ ghara ịpụ. Gbanwee ya ka ikuku banye na mmiri dị na tank.
Na mgbakwunye na inyere gị aka, nke a nwekwara ike inye aka gbaa arịa ụlọ gburugburu ma gbochie mgbidi ma ọ bụ ngwá ụlọ ka ọ ghara imebi site na enweghị mmiri.
Jupụta ite ahụ na mmiri ma tinye okooko osisi ị chọrọ. Ndị a ga-ahụ maka ime otu ihe ahụ na osisi. Ewezuga nke ahụ, ha bụ ihe eji achọ mma nke nwere ike ime ka ọnụ ụlọ dị mma.
Tinye mmiri n'akụkụ ebe okpomọkụ
Ị nwere radiator? Iji jiri okpomọkụ sitere na ikpo ọkụ gị mee ka ụlọ gị dị jụụ, debe otu iko mmiri zuru ezu n'akụkụ ya, ma ọ bụ ọbụna n'elu unit ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Usoro a na-eji nwayọọ nwayọọ na-ekpochapụ mmiri, na uzuoku na-ahụ maka ịgbakwụnye mmiri na gburugburu ebe obibi na igbochi ya ịsachapụ.
Uru nke ụzọ a bụ na ị ga-eji okpomọkụ na-enweta okpomọkụ nke ịchọrọ, ebe ị na-enye gị ọkwa iru mmiri ka mma.
nke a doro anya otu n'ime nhọrọ kachasị mfe n'ihi na isi nri bụ ihe anyị na-eme kwa ụbọchị. Isi nri dị ka ofe ma ọ bụ ude ma ọ bụ naanị esi mmiri ga-ahapụ mmiri ma mee ka gburugburu ebe obibi ghara ịkọrọ.
kpọgidere uwe n'ụlọ
Iji mee ka anya dị ọcha ma zere iwepụta ọtụtụ ohere, ọtụtụ ndị na-ekowe uwe ha n'èzí ụlọ. Otú ọ dị, ịkwanye uwe mmiri n'ime ụlọ nwere ike inye aka mee ka iru mmiri dị gburugburu. E wezụga nke ahụ, ị nwere ike iji ncha eji eme ihe tinye ọnụ ụlọ ahụ.
Ewelitela ọnọdụ okpomọkụ nke ukwuu
Idobe gburugburu ebe obibi ntakịrị oyi ga-enye gị iru mmiri dị elu, ebe ọ bụ na ịgbanye ọkụ bụ ihe mbụ na-akpata okpomọkụ dị elu na-eduga na gburugburu ebe akọrọ. Jiri akwa mkpuchi na akwa kpuchie ma zere ịdabere na isi mmalite okpomọkụ ndị ahụ ka ị na-ekpo ọkụ.
Jiri mkpụrụedemede dị n'ime
N'ikpeazụ, ịzụrụ isi iyi ime ụlọ nwere ike na-efu ego mana ọ nwekwara ike inyere gị aka ịchọ ụlọ gị mma. Ihe ndị a na-abịa n'ụdị nha na ụdị dị iche iche. ka i wee họrọ nke dabara gị ụtọ.
Nke kachasị mma, ige ntị ụda nke mmiri na-ada ada ga-eme ka ahụ dị gị mma, ya mere ị nwere ike irite uru site na ịchọ mma, izu ike na moisturize na otu ngwaahịa.
Ịgbaso usoro ole na ole nwere ike inyere gị aka ime ka iru mmiri dị mma n'oge na-adịghị anya, Otú ọ dị, ịgbaso usoro ole na ole n'otu oge ga-eme ka ụlọ gị ruo ogo iru mmiri kachasị mma n'oge na-adịghị anya.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu otu esi eme ka iru mmiri dị gburugburu na-enweghị humidifier.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Homelọ Green » Otu esi eme iru mmiri na gburugburu ebe obibi na-enweghị humidifier
Ihe na-akpata mmetụta griin haus